Fasiraado nuucee ah ayaa laga bixiyay hadalladii kasoo baxay Famaajo iyo Kheyre.
Saturday July 11, 2020 - 12:26:29 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Fasiraado kala duwan ayaa laga bixiyay war khamiistii lasoo dhaafay kasoo baxay madaxda ugu sarraysa dowladda Federaalka Soomaaliya oo ku aadanaa hanaanka doorashooyinka.
Xasan Cali Kheyre oo lahadlayay golaha wasiirrada ayaa sheegay in aan la ogolaan karin in xukuumadda hadda jirta ay waqti kororsi sameyso wuxuuna ka digay dhibaatada arrintaas ka dhalan karta.
"Waa in doorashadu ay ku dhacdo waqtigii loogu tala galay, lagana fogaadaa in lagu shaqeeyo fikir ku saleysan mudo kordhin sababtoo ah mudo kordhintu waxay horseedi kartaa qalaase siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuur" ayuu yiri Kheyre.
Saacado kadib Farmaajo ayaa isna soo saaray qoraal uu ku ayiday hadalka R/wasaarahe balse wuxuu ahaa hadalka ka dabacsan midka Xasan Cali Kheyre.
Siyaasiyiin mucaarad ah iyo falanqeeyayaal ayaa sharraxaad siyaasadeed ka bixiyay hadalladan kasoo kala baxay madaxda dowladda.
Fasiraadda koowaad ee laga bixiyay ayaa ah in Xisbiga Nabad iyo Nolol uu si hordhac ah ubahdilayo waxa lafilayo in ay kasoo baxaan shirka hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ee ka socda magaalada Dhuusamareeb.
Aragtida labaad ayaa ah in khilaaf iyo kala aragti duwanaashiyo ay soo kala dhaxgashay Farmaajo iyo Kheyre, xafiiska R/wasaaraha ayaa doonaya in uu isku muujiyo awood uu ku kasbanayo siyaasiyiinta mucaaradka ah si uu saami siyaasadeed uga helo doorashooyinka soo socda.
Qoraalka kasoo baxay madaxtooyada waxaa shuruudo lagu xiray doorashada oo la yiri waa in ay waafaqsanaato dastuurka dowladda udegsan islamarkaanka ay noqotay mid loo dhanyahay halka Kheyre uusan wax shardi ah ku xirin doorashada arrinkaas ayaana laga qaadan karaa in labada dhinac ay is khilaafsanyihiin.
Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur iyo Xasan Sheekh oo arrintan ka jawaabay ayaa shaki ka muujiyay hadallada kasoo baxay Kheyre iyo Farmaajo.
"Waxaa is waydiin mudan waa ayo cida uu is leeyahay Madaxweynuhu waad siri kartaa, mar haddii inta siyaasadda ku hawlan iyo inta falanqeysaba ay si fudud u fahmi karaan farriinta is burrinaysa ee baaqa ka daba tuurka ah ee Madaxtooyada’?" sidaas waxaa yiri Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur.
Baraha bulshada waxaa hareeyay doodda ku aadan in Farmaajo iyo R/wasaarihiisa ay is khilaafsanyihiin waxaana soo baxaya warar sheegaya in xisbiga Nabad iyo Nolol uu dhaxdiisa is khilaafsanyahay.
Hoggaamiyaasha mucaaradsan Villa Somalia iyo waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa bilihii lasoo dhaafay muujinayay walaaca ay ka qabaan in waqti kororsi uu dhaco.
Sawirro: Degmada Ceelbuur oo laga ciiday Ciidul Adxaa.
Dowladda Sweden oo dhaleecaysay tallaabadii lagu Eryay Xasan Cali Kheyre.
Saciid Deni oo dhaleeceeyay Eryiddii Xasan Cali Kheyre.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi oo laga helay Kiiskii ugu horreeyay ee Carona Virus.
Daawo Video: Baarlamaanka dowladda oo Eryay R/wasaare Xasan Cali Kheyre.
Video: Hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo deeq gaarsiisay Qoysas Barakacayaal ah.
Hoos u dhaca dhaqaalaha ayaa ah halis kale oo ay Itoobiya wajahayso [Warbixin].
Turkiga iyo Qadar oo calooshood ushaqeystayaal Soomaali ah geynaya dalka Liibiya.